Shabakadda Nafis: Hablaha in looga turo falalka gudniinka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Khadra Cumar Xasan, guddoomiyaha shabakadda Nafis ee Soomaaliland.
Vänster: Abdirahman Gas och Khadra Omar.
Khadra Cumar iyo Cabdiraxmaan Gaas oo ku sugan Kista.
Shabakadda Nafis: Hablaha in looga turo falalka gudniinka
Khadra "Waxay oran gabadha ha la xalaaleeyo"
La daabacay onsdag 23 augusti 2017 kl 16.00
Sanooyin badan ayaa la hadal hayey, isla markaana lagu taamayey sidii noocyadeeda kala duwan ee bulshada looga wacyo gelin lahaa dhibaatooyinka uu leeyahay dhaqanka gudniinka hablaha ee bulshada soomaaliyeed.
Hase yeeshee ey weli jiraan xoogag ay ka sal-dhigan la’dahay xaaladdaa sidii loo yareen lahaa amba looga bixi lahaa.
-Shuruucdii ayaan lagu dabaqin. Mar dhankii diinta, marna dhankii shuruucda ayaa loola carareyaa. Kii sunniguna ma dhaamo. Bulshadii ayaan dhan uga soo wada jeedin. Gabadhii waxaa la leeyahay ”ha la xallaaleeyo”. Waa dhaqan muddo soo jiray oo ay adag tahay sidii looga gudbi lahaa. Waxaa loo baahan yahay shuruuc adadag oo bulshada laga hir-geliyo in laga soo saaro, waa sida aan u arko.
Laba howl-wadeen oo ka socda Shabakadda Nafis oo dhowaantan booqasho ku yimid magaalada Stockholm ayaa ku macneeyey inuu safarkoodii guul ku soo gabagaboobey. Iyagoona ka guul gaarey howlihii ey u yimaadeen dalka iyo sidii ey kulmmo ula yeelan lahaayeen ururrada ey wada-shaqeeynta leeyihiin, sida ay idaacadda ugu warrantay Khadra Cumar Xasan, guddoomiyaha shabakadda Nafis.
-Safarkayaga waxaa ugu muhiimsanaa kulan laba maalmood ah oo ay nagu casumeen ururka SSRA oo ey wada-shaqeeyni naga dhaxeeyso, iyada oo dabadeed aannu kulammo kale la yeelaney ururro iyo hayado iswiidhen ka aasaasan oo uu ka mid yahay forum Syd oo horay ey wada-shaqeeyni nooga dhaxeeysay iyo qaar kale oo aannu xiiseeynaynay iyo kuwo iyagu na xiiseeynayay, sidii aan uga wada xaajoon laheyn howlaha aannu qabanno iyo sidii aannu waayo-arag-nimo isu dhaaf-san laheyn, sida ay sheegtay.
Shabakadda Nafis oo ey ku midoobeen 20 urur oo madax-bannaan ayaa dhinacyo kala duwan ka abbaara dhibaatada uu leeyahay gudniinka hablaha iyo sidii gacan loogu fidirn lahaa kuwooda soo marey ee u dhibaateey-san haraagiisii. Dhibaatooyin badan oo haweenka u dhigtay jid-gooyo ayaa laga baxay ama lagu socdaa dhabbadii looga bixi lahaa, hase yeeshee uu gudniinka haweenku ka mid yahay howlaha ugu dhibta badan oo ay adag tahay sidii looga gudbi lahaa, sida ay sheegtay Khadra Cumar Xasan, ahna hoggaamiyaha shabakadda Nafis:
-Inksatoo uu faqooqii iyo dhibaatooyinkii dumarka lagu hayay weli aloo-san yahay, waxaa dhanka kale lagu guuleeystay inuu is-bedel dhaco haba yaraadee. Maanta waxaa jira wasiirro, agaasimeyaal guud oo haween ah haba yaraadaane. Hase yeeshee culeeyskii ey raggu nagu hayeen waxaa noo raacay midka uu nagu hayo caadada gudniinka habluhu.
Ururrada shabakadda nafis ayaa siyaabo kala duwan u abbaara howlahooda la xiriira ka hor-tagga gudniinka hablaha. Waxaa ka mid ah sidii kor loogu soo qaadi lahaa dhaqaalaha haweenka dan-yarta.
Mashruuc loogu magac darey ”Self Help Group – Kooxda Dan-wadaag” oo ey xubno ka yihiin boqolaal kun oo ka mid ah haweenka reer Soomaaliland, ayaa ku howlan, ganacsi laga abuurey ayuuto ama ragbaddii oo la casriyeeyey, sida ay sheegtay Khadra Cumar Xasan:
-Waa ragbaddii oo la casriyeeyey. Baayacmushtar aan weynayn sidii ey ku bilaabi lahaayeen oo ey ku gaaraan isku fillaansho dhaqaale iyo fahanka dhibaatada gudniinka hablaha.
Shabakadda Nafis ayaa sidoo kale ku howlan sidii gacan loogu fidin lahaa haweenka ey wax-yeelooyinku ka soo gaaraan noloshooda dambe ee gudniinka. Iyadoo wada-shaqeeyn ey la leeyihiin goobaha iyo hayadaha dar-yeelka caafimaad intaba.
-Mashruucan oo loogu magac-darey ”Fgm survival support” ayayaa wax-tarrada uu geeysto ey ugu waaweeyn yihiin in dib loo tolo dumarka isku furma umusha dabadeed iyo in laga jaro burooyin ka soo baxa haweenka gudniinka lagu faley.
Sida ay sheegtay Khadra Cumar Xasan, ahna guddoomiyaha shabakadda Nafis ee Soomaaliland oo dhowaan safar shaqo ku timid magaalada Stockholm.
Muddo intee le'eg ayay qaadan in gudniinka gabdhuhu uu ka joogsado Soomaaliya?